Naseho ny : 29 janoary 2022
Isaky ny 04 Febroary no fanamarihana ny andro manerantany ho an'ny homamiadana, izay aretina mety hafaty raha tsy voatsabo. Ny homamiadana dia aretina azo avy amin'ny fiovan'ny sela ao anatin'ny olombelona, izay mitombo mihoapapana sy tsy voafehin'ny vatana intsony. Ny homamiadana dia miteraka fivontosana ka manimba ny taova misy azy ary mety hiparitaka amin'ny taova hafa. Ny homamiadana dia azo tilina, azo soroina ary azo tsaboina.
Ny fitaizana ny fahasalamana
Naseho ny : 8 janoary 2022
Ny Fitaizam-pahasalamana amin'ny lafiny rehetra dia sarobidy satria ny fahasalamana no iankinan'ny fiainana manontolo. Ny fahasalamana no voalohan-karena ary ilaina tandrovina tsara. Ny fahasalamana dia tsy hoe "tsy fisian'aretina" fotsiny ihany, fa azo hadika ho fahatomombanana ara-batana, ara-tsaina, ara-pifandraisana sy ara-tsosialy ihany koa...
Naseho ny : 4 desambra 2021
Ny zaza dia tsy mahavita mamaritra ny aretina mahazo azy, ireo ankizy enina taona mihoatra kosa dia mahavita miteny ny olany ara-pahasalamana. Ny aretin'andoha dia fanaintainana re vokatry ny fibontsonan'ny lalan-dra na fikaikon'ny hozatra amin'ny faritry ny loha. Antony mahatonta ny aretin'andoha: fanaviana, fidinana na fiakaran'ny tosi-dra, olan'ny maso, tsy ampy torimaso, fahalotoan'ny rivotra, lalan-dra tsentsina...
Ny fahasalamana sy ny fahasimban'ny tontolo iainana
Naseho ny : 20 novambra 2021
Ny tontolo iainana dia ireo rehetra manodidina sy iankinan'ny fiainantsika olombelona toy ny tany sy izay rehetra eo aminy, ny rano, ny rivotra, ny masoandro, ny zava-maniry, ny ranomasina. Fahasalamana mira aina, raha misy fahasimbana ireo voatanisa eo aloha ireo dia misy fiatraikany amin'ny fahasalamana. Ohatra ny fahalotoan'ny rivotra dia miteraka olana amin'ny taovam-pisefona, miteraka tsy fahasalamana lasa mikohoka, voan'ny sery, sepotra. Ny rano misy loto dia miteraka aretina maro...
Pejy 5 amin'ny 17